apple ingakurumidza kurega iwe unsend imessages
Kuru Nhau & Ongororo Apple inogona kukurumidza kurega iwe unsend iMessages
Maererano nerunyerekupe, Apple iri kuyedza boka rezvinhu zvinobatsira zveMessage izvo zvingangoita kuti iite iyo iOS 14. Mumwe weavo achazorega uchidzora mameseji atotumirwa, nechinyorwa chakatsetseka chinoonekwa kune vese vanotumira uye anogamuchira zvichiratidza kuti meseji yabviswa mutsetse wehurukuro.
Izvo zvakasiyana sei nekungodzima meseji iwe & apos; yawatumira pamusoro peMessage? Zvakareruka - izvo zvinobva zvabvisirwa iwe chete uye pasina mumwe wevanogamuchira. Kudzoreredza, zvisinei, zvinokutendera kuti 'usaendese' meseji, uchiibvisa kubva kune ako neanogamuchira & apos; s dzakasiyana tambo dzehurukuro. Chinhu chinonamatwa chinogona kukununura kubva kunguva idzo uropi hwako hunokunyengerera mukutumira gibberish kana ... zvinonyadzisa zvikuru zvemamiriro ezvinhu.Oops!
Imwe iMessage nyowani iyo & apos; inofungidzirwa muchiso chekuyedza inokurega iwe tag kana kutaura chaiwo maficha nenzira inononoka-senge uchishandisa iyo @ chiratidzo. Paunenge uchitaipa iyoyo nekhibhodi yako, yako iPhone ichakuratidza runyorwa rwevanokutaurisa iwe kuti usarudze kubva uye utaure. Munhu akamakwa anozonzi achanyeverwa kunyangwe akaremadza yambiro yeiyo chaiyo tambo yekutaura, iyo inowanzo shanda pane hurukuro dzeboka.
Asi izvo & maapos hazvisi zvese: zvinoita kunge iMessage inogona kuwana mamwe maficha. Kunyanya, '/ me' rairo inonzi iri kuyedzwa. Izvo zvaizokutendera iwe kuti ugovane yakasarudzika mamiriro emamiriro mukati meiyo tambo yekutaura, iyo yakafanana neiyo iyo Skype uye Slack inokutendera iwe kuti uite. Ikoko kwaizove zvakare nekutaipa zviratidzo zveboka chats, izvo zviri kuve zvakajairika trope yevazhinji mameseji vatengi, kunyanya iwo ane desktop desktop. Iwe uchaita kunge uchakwanisa kutara meseji yekupedzisira muhurukuro seisina 'kuverenga' kunyangwe mushure mekuivhura.
Zvese izvi zvinoratidza kuti Apple ingangogadzirira kugadzirisa iyo Messages app neyakaurayiwa yezvinhu izvo zvinoita kuti ive mukwikwidzi wakananga kuSlack uye Skype, maviri anonyanya kushanda-anotungamira mameseji masevhisi. Mazhinji eaya angangoita kuti iite iyo Mac vhezheni yeMameseji zvakare, ichibvumira Apple kutora Slack uye Skype pane desktop zvakare.
Zvinhu izvi zvinoburitswa riini, kana zvachose? Zvikanzi, pamusangano unotevera weWWDC mushambadzi, chero ikasaiti kukanzurwa nekuda kwekuputika kwekoronavirus iyo & apos iri kutsvaira. Uye iye aigona kuve mudiki pane Apple & apos; s matambudziko izvozvi.
Nekudaro, humbowo hwekuyambuka-chikuva rutsigiro hauchina kwekuonekwa, asi regai maapos ave akatendeka - zvinogona kunge zvisingaitike.
nzira yekugadzira isina kujairika nhamba muJava
selenium tsvaga chinhu nerudzi
Mushandisi Kunyoresa Maitiro uye Maedzo Ekuongorora
Mini-LED iPad Pro inoratidzira nyaya dzakatsanangurwa: Chii & apos; s 'kukura' uye pane kurongeka
Maitiro ekuchengetedza bhatiri pane iPhone SE (2020), chero iPhone
Spigen Neo Mbeu dzakauchikwa EX Nyaya yeApple iPhone 6 Ongororo